ပန်းကောင်း တစ်ပွင့် – Rose | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Environment » ပန်းကောင်း တစ်ပွင့် – Rose	38
ပန်းကောင်း တစ်ပွင့် – Rose
Posted by ဇီဇီ on Mar 11, 2015 in Environment, Home & Garden, My Dear Diary, Photography, Society & Lifestyle | 38 comments
ဓာတ်ပုံတင်မယ်ဆိုပြီး အက်ဒစ်လုပ်ရင်း သီချင်းစာသားတစ်ခု ခေါင်းထဲရောက်လာလို့။
အရင် ဘယ်သူ ဆိုတာမသိပေမဲ့ ကိုယ် စနားထောင်ဖူးတာတော့ ဟေမာနေဝင်း ဆိုတာပါ။
“တစ်ပွင့်ပန်မယ်၊ တစ်ပွင့်တည်းးးးးပန်မယ်၊ ငွေသားနု ဝတ်မှုန်ရယ်” ဆိုတဲ့ စာသားလေးးးး
ပြောချင်တာက အရင် က အမျိုးသမီးတွေဟာ
“မိန်းမကောင်း ပန်းပန် တစ်ပွင့်တန်” ဆိုတဲ့ အရာကို ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခံခဲ့ရတာ။
ထားမိတဲ့ ရည်းစား ဘာအမှားတွေ့တွေ့ ဒီလူကြိုက်မိ ဒီလူကိုပဲ ယူ။
အဲဒီလူ မယူမှသာ ဒူးနဲ့ မျက်ရည်သုတ်နေပေါ့။
တစ်မျက်နှာကနေ နောက်တစ်မျက်နှာ မပြောင်းကောင်းဘူးး
တည်မိတဲ့ ဘုရား ဠင်းတ နားနားဆိုသလို ယူမိတဲ့ ယောက်ကျား နှိပ်စက်သမျှ ပေတေပြီး ခံ စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။
ကိုယ်ကတော့ ပန်းတစ်ပွင့်တည်း ပန်ချင်တဲ့ မိန်းမထဲ မပါဘူးလို့။
(တိုက်ရိုက်တွေးနော်၊ ပန်းပန်တဲ့ ကိစ္စကို ပြောတာ) ပန်ရင်တောင် ပိတောက်တို့၊ သနပ်ခါးပန်းတို့၊ ဂေါ်သဇင်တို့လို……
ပန်းပွင့်သေးသေးလေးတွေ ပါတဲ့ အခိုင်လိုက်ကို ပန်ရတာကြိုက်တယ်။
တစ်ပွင့်ပန်းထဲတော့ နှင်းဆီကို အကြိုက်ဆုံးမို့ ရောက်ရာ အရပ် တွေ့ရာ အရပ်မှာ ရိုက်ပါတယ်။
အဖြူလေးတွေက စလုံး မှာ ရိုက်ထားတာဖြစ်ပြီး…
ကျန်တာတွေက မေမြို့နဲ့ ပုဂံ က နှင်းဆီလေးတွေပါ။
ဇီဇီ has written 330 post in this Website..
တောင်ပေါ်သား says: ဒို့ကတော့ မှားပန်မိတဲ့ပန်း လွမ်းမနေဘူး
အခုတော့ ပန်းကောင်းလေးရှာရင်း ပန်းတောထဲမှာ မောနေပြီကွယ်
Kaung Kin Pyar says: ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်ရှာနေတာများးးး
တောင်ပေါ်သား says: အပျိုကြီးတွေကတော့ ဒီလိုထင်မပေါ့လေ ဟဲ ဟဲ :P
ခင်ဇော် says: ပန်း ဆို တာလည်း ခူးပြီးရင် ညှိုးသွားတဲ့ အမျိုးကိုးးး
ဘယ်ပန်းမှ မရှာပဲ ပန်းတောထဲမှာ ကြည်နူးကြည့်ပါ။
Kaung Kin Pyar says: လှလိုက်တာ…
၄ လဲကြိုက်တယ်…၈လဲ ကြိုက်တယ်…၅ လဲ လှတာပဲ…..
ပန်းတော့ သိပ်မပန်ဖြစ်….တစ်ခါတစ်လေ..ပန်ချင်ရင်လဲ လမ်းဘေးမယ် မိုးတွင်းဆိုပေါက်တဲ့ ပန်းရောင်ဝါ၀ါလေးတွေလဲ ပန်တယ်…၊ အမေစိုက်ထားတဲ့ နှင်းဆီတွေတော့ မျက်စောင်းနဲ့တောင် လှည့်မထိုးနဲ့ ဘုရားပန်းကပ်မှာဆိုလို့…..
ဦးကြောင်ကြီး says: အပြာရောင်ကင်းကောင်ဟင်း ဆားခြင်သီ… ကျွေးဗာ
ခင်ဇော် says: ကွကိုယ်
တစ်ပင်စိုက်ပြီး ခူးပန် လေ။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ​သားနားမလည်​ဘုစ်​
သားသိတာ ပန်းဆိုတာ အပင်​​တေရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါ
ဦးကြောင်ကြီး says: ဓါစို ပင်လပြွတ်နဲ့ ပင်စပွတ် ပေါ့စ်… နီဆပြောဒါနော်.. နှာပူးဂေါင်။
မွသဲ ( 17082011 ) says: နှင်းဆီကတော့ အပင်မှာဆိုမကြိုက်ဖူးရယ်။ အလှအိုးထိုး ဘုရားအိုးထိုးထားရင်တအားကြိုက်။ အိမ်မှာဘုရားပန်းရှိလဲ နှင်းဆီလှရင်ဝဟ်ဝယ်လာပြီးအလှအိုးထိုးလွန်းလို့ ပိုက်ဆံဖြုန်းတယ်ဆိုပြီးဆဲခံရတာအခါခါ။ ဒါပေမဲ့အမှတ်မရှိနှင်းဆီပန်းမြင်ရင်ငမ်းတုန်း ဝယ်ချင်တုန်း
ခင်ဇော် says: ဟုတ်တယ် မွသဲ။
အလှပန်းအိုး ဆိုရင် နှင်းဆီမှ လှတယ်ထင်တာပဲ။
ဒီမှာ က သစ်ခွက ပိုသက်သာတယ်။
နှင်းဆီ က ဈေးကြီးတယ်။
pooch says: သများက သစ်ခွပိုကြိုက်တယ် နှင်းဆီလည်း ကြိုက်ပါတယ် ငါးညှီရေလောင်းရင် ပိုပွင့်တယ်
အောက်ဆုံးက လိမ္မော်ရောင်နှင်းဆီက အလှဆုံး သူ့ဟန်က မပွင့်ချင်သလိုလို ပွင့်ချင်သလိုလို နှင်းဆီပန်းကို အပွင့်လွန်ပြီး အာတာတာဖြစ်နေရင် မကြိုက်တော့ဘူး အလှပျက်သလိုပဲ
အကြိုက်ဆုံး ချိန်က လိမ္မော်ရောင်လိုမျိုး
သတို့သမီး လက်ကိုင်ပန်းကို အဖူးလေးတွေမပွင့်တပွင့်လေးတွေနဲ့ လုပ်ရင် ပိုလှ တယ်
အဖြူရောင်လေးလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဆပ်ပြာရည်လောင်းရင်လည်း အရမ်းပွင့်တယ်။
ကြက်သွေးပုတ်ရောင်နှင်းဆီ ပွင့်ဖတ် ထူထူ အရိုးခိုင်ခိုင် နှင်းဆီတွေကို ပိုရင်ခုန်တယ်။
နံပတ် ၅ လိုမျိုးလေ။
Alinsett@Maung Thura says: တိုက်ရိုက်ပြောမှာနော်
အမေစုလည်း ပန်းပန်ရင် တပွင့်ထဲ မပန်ဘူး
ပန်းတကာပန်း ပန်ထားသမျှ အလှဆုံးက
အမေစု ဆံနွယ်တွေထက်က ဝေနေတဲ့ပန်းတွေပဲ. . .လို့
ခင်ဇော် says: ခါတလေ နှင်းဆီပွင့်အကြီးကြီးကို နောက်တွဲဆံထုံးလေးမှာ ပန်တတ်တယ်။
အဖြူလေးတွေဆို ၃ ပွင့်လောက် စီပြီး ပန်တတ်တာ။
Mr. MarGa says: ပုံထဲမှာ
နှင်းဆီ ဆိုရင် ဆူးနဲ့ပဲ တွဲမြင်တတ်တော့
တစ်ခုခု လိုနေ သလို လို…………..
ခင်ဇော် says: ဘောင်ထဲက ထွက်ပါ။
နှင်းဆီတိုင်း ဆူးပါရမယ်လို့ ဘူမှ ပြောဘူးးး
အရမ်းကြည့်ချင်ရင် ပထမဆုံးပုံမှာ ကြည့်။
Mr. MarGa says: Think out of the box ပေါ့ ဟလား
တခါတခါကျ ဘောင်ထဲက ထွက်ချင်ပေမယ့် ISO လို စံနှုန်းတွေနဲ့ ပြန်ချုပ်ထားတတ်သေးတာ ဆိုတော့လည်း……..
နောက်ဆုံးထွက် Macbook Air ကတော့ ဘောင်ထဲက ထွက်တာ ဟိုဘက်တောင် လွန်သွားပါရောလား ဟင်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: နှင်းဆီဆိုရင်…မမဂျီးလိုအရွယ်
အပွင့်မျိုးမှ ကြိုက်ထှာ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဘယ်ဟာ ရဲ့ အရွယ်တုန်း?/
Mike says: .ပန်းကြိုက်တဲ့မမ များအတွက် နှင်းဆီလှလှလေးတွေပေါ့
.မဒမ်မိုက်ပန်းပန်တာတော့ကျုပ်မတွေ့ဖူးဘူး..ဟီဟိ..အကုန်သက်သာချက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ပန်းပန်စရာမလိုအောင် လှတဲ့ မီး ပေါ့။
Wow says: ပန်းဆို လှတာမြင်ရင်တော့ ကြည်နူးပါတယ် ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုပဲ… ပန်လဲမပန်တတ် ဘုရားကပ်တာကျလဲ လုပ်လေ့သိပ်မရှိ…
ခင်ဇော် says: ခါတလေ
ကိုယ့်ကို မြင်နေကျ ပုံစံက ခွဲပြီးးး
ပန်းးလေးးပန်ပြလိုက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1848
nozomi says: ခင်ဇော်င်္ကြီးတို့ လူကသာ လူမိုက်ခေါင်းဆောင်
လုပ်နေတာ အလှ အပတော့ ကြိုက်တတ်သားးးး
ခင်ဇော် says: အင်းဆို။
naywoon ni says: ဒီလိုခင်​​ဈော်​​ရေ့ ညည်းစာဖတ်​ရင်း ​ခေါင်းထဲ​ရောက်​လာတာက​တော့ ဖိုးချို သီချင်း​လေးပဲ ။
“ဆူးများတဲ့ ပန်းမို့ လက်​လည်း မလှမ်း​တော့ပါ ​နောက်​ဆုတ်​ လက်​ပိုက်​ကြည့်​​နေမယ်​ ”
သီးချင်းစာသား​လေးက လှတယ်​ ။ ဆူးများလို့ ဆူး​တွေဖယ်​ပြီးခူးရင်​ရသား ။ သူကမခူး​တော့ပါဘူးတဲ့ ​နောက်​ဆုတ်​လက်​ပိုက်​ပြီးပြီး ပန်းအလှကိုပဲ ကြည့်​​နေ​တော့မယ်​ဆိုပါ့လား ။ ငါတို့​တွေ့ဖူးတဲ့ နှင်းဆီ​တွေက​တော့ ​တောနှင်းဆီ ပို့လားမသိ ဆူးများမှများ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: တောနှင်းဆီ ဆိုတာ ခြုံနဲ့ ပွင့်တာများလားးး
သေးသေးမွှေးမွှေး နဲ့ အများကြီး ပွင့်တာလား
black chaw says: မွန်းအောင် သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ရှိတယ်…။
ပန်းစိုက်သူတို့၏ ဝေဒနာ တဲ့…။
ဥယာဉ်မှူးတွေ ရဲ့ ဖီလင်လေးကို ဖွဲ့ထားတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ…။
စာသား လေး ကို ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦး…။
ငါတို့ စိုက်ပျိုးလို့ ဖူးပွင့်ခဲ့တဲ့ ပန်းလေးတွေကို
လူ့လောက ကမ္ဘာကြီး လှပဖို့ စေတနာ…။
ငါတို့ ဘ၀ထဲက သွေးချွေးတို့နဲ့ ရင်းနှီးကာရယ်
လူ့လောက ကမ္ဘာကြီးလှပဖို့ စေတနာ…။
အဲ့သီချင်းကို နားထောင်ပြီး ပန်းလေးတွေကိုမြင်ရင်
ပန်းလေးတွေမှာ ဥယာဉ်မှူးရှိမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေး
အခု ညီး ရိုက်ခဲ့တဲ့ နှင်းဆီပန်းလေးတွေမှာလည်း
သူတို့ စိုက်ပျိုးထားခဲ့တဲ့ ပန်းလေးတွေ ရဲ့ အလှကို
မှတ်တမ်းတင်ပေးသွားတဲ့ ညီးကို ကျေးဇူးတင်ကြမှာပါပဲ…။
အဲဒီ နှင်းဆီပန်းလေးတွေ အခုလောက်ဆို ညှိုးခြောက်နေလောက်ရောပေါ့…။
ဒါပေမယ့် ညီးမှတ်တမ်းတင်ပေးထားလိုက် နိုင်ပါတယ်…။
တစ်ပွင့်ခြင်းစီ က တစ်မျိုးစီလှကြပါတယ်…။
ငွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့ မရနိုင်ပါ
ခင်ဇော် says: လိုရာရောက်ပါတယ်ဗျာ။
ကျနော် ဒီပို့(စ) တင်နေရင်းနဲ့ တွေးမိတာ ဒီအချိန်ဆို ဒီပန်းပွင့်တွေ မရှိတော့ဘူးလို့။
Ma Ma says: တခါမှမစိုက်ဖူးပဲ တော်ဝင်နှင်းဆီမှာတွေ့တဲ့ နှင်းဆီတွေ ကြည့်ပြီး မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ၀ယ်လာတာ။
နောက်မှ အကိုင်းဖြတ်တာကအစ၊ မှိုသတ်ဆေး၊ အပင်အားဆေး၊ အပွင့်အားဆေးတွေ ပေးရတာ မလုပ်တတ် လုပ်တတ်နဲ့ အပင်တွေ ကုန်ပါရောလား။
ဆိုင်ကိုမေးတော့လည်း စိုက်နည်းမပြောပြ၊ အပင်ပြုပြင်ဖို့ အဲဒီကလုပ်သားလေးတွေကိုခေါ်ဖို့လည်း ခွင့်မပြု။
နောက်ဆုံးတော့ မေမြို့သွားတုန်းက ၀ယ်လာတဲ့ ဗမာမျိုး အပင်လေးတွေ ကျတော့မှ အကြမ်းခံပြီး သိပ်ပြုစုစရာမလိုလို့ အဲဒီအပင်တွေပဲ ကျန်တော့တယ်။
ကိုယ်စိုက်တဲ့ပန်းများ တပွင့်လောက်ပွင့်ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ အမော။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: သများး လက် နဲ့ စိုက်လို့ ဖြစ်တာ ဆိုလို့
ရွှေလာ ငွေလာ ဂမုန်းးပဲရှိတယ်..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3919
weiwei says: နှင်းဆီပန်း အနံ့ကိုပါ ကြိုက်​တယ်​။
အခုတ​လော လိ​မော်​​ရောင်​ အပွင့်​ကြီးတဲ့ နှင်းဆီပန်း ​ပေါ်​နေတယ်​။
ခင်ဇော် says: နှင်းဆီ နက်ကို ရိုက်ထားတာရှိတယ်။
မြစပဲရိုး says: ကြည့်ရတာ “မိန်းမကောင်း ပန်းကောင်းတစ်ပွင့်ပန်” ဆိုတာ ပလန်အေ၊ ဘီ၊ စီ မချ တတ်လို့ နေမှာပါ။ဟိ။
ပုံ ၅ နဲ့ ၁၀ ကို အကြိုက်ဆုံး။
ကျန်တာ တွေလဲ လှပါတယ်။ တစ်ပွင့်ဘဲ ရွေး ဆိုရင်တော့ နံပါတ် ၁၀ ပေါ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဟိ။
ပလန် အေ တူ ဇက် ချတတ်ရင်တော့
ပန်း ၂၆ ပွင့် ပန်နိုင်မှာပေါ့။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အရီး မမြင်ဖူးဘူး ဆိုလို့ ထပ်ဖြည့်ထားတယ်။
သူ့ အညွှန်းကတော့ Black Rose (or) နှင်းးဆီနက်တဲ့..!!
ညဘက် ဖုံးနဲ့ ရိုက်မိတာမို့ ဂလောက်ပဲ ရတယ်။
ကျနော့ မျက်လုံးးထဲတော့ မရမ်းးပုပ်ရောင် ရင့်ရင့်ပဲရှိတယ်
YE YINT HLAING says: တပွင့်ပန်းတော့ မကြိုက်ဘူးဗျ။